ဘယ်လိုလူမျိုးတွေသာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလျံ၂၀ ပြပြီး MICကားပါမစ်လုပ်ကိုင်နိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ဘယ်လိုလူမျိုးတွေသာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလျံ၂၀ ပြပြီး MICကားပါမစ်လုပ်ကိုင်နိုင်
ဘယ်လိုလူမျိုးတွေသာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလျံ၂၀ ပြပြီး MICကားပါမစ်လုပ်ကိုင်နိုင်
Posted by etone on May 9, 2012 in Critic, Think Different | 24 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း ယုံရလည်းခက် ၊ ရယ်ရလည်းခက်
ပြည်မြန်မာဂျာနယ် အမှတ်(၈၁၈) 10.5.12 ထုတ် ဂျာနယ် စာမျက်နှာ ၂၃ က သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရင်း…. ဥာဏ်မမှီတော့တာကြောင့် scan ဖတ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
ဘီလျံ ၂၀ဆိုတာ နည်းနည်းနောနော ငွေကြေးလားနော် ။ ဒါတောင်မှ မြန်မာငွေမဟုတ်ဘူးနော် ။ အမေရိကန်ဒေါ်လာဆိုပဲ ။ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း … သို့လော သို့လော အတွေးတွေပွားနေတာကြောင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ လုပ်ကိုင်နိုင်မလဲလို့လည်း သိချင်စိတ်ပြင်းပျမိပါတယ် ။
ဟင်.င်.င်… နာတာ မြန်မာနိုင်ဂန် မှာ အမေဒိတန် ဒေါ်လှ တွမ်တီ ဘီလီယံ ရှိလိုကတော့ ကားမထုတ် တော့ဘူး ။ ငဲ.. ငဲ..ငဲ..
ဒါနဲ့ စကားမစပ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲဒီလောက် ချမ်းသာတဲ့သူ မရှိဘူးမထင်နဲ့နော်။ စာရင်းအင်း တွေနဲ့ တိတိကျကျ မရှိလို့သာမသိကြတာ။
အဲလာကငွေမဲကိုငွေဖြူလုပ်ချင်သူတွေအတွက်ကိုဖွင့်ပေးတာ။ ကြည့်နေ ငွေမဲသမားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ဟိန်း ၀င်း (ထားဝယ်သား) says:
အဲဒါဆို အရင်ကနဲ့ ဘာမှလဲမထူးဘူးပေါ့ … ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ … အခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး …
ဒေါ်လာချည်း ဘီလီယံ၂၀ ဘဏ်မှာထားတဲ့သူ ကမ္ဘာမှာရော ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလို့လဲ…။
ကျုပ်ထင်တာတော့ million ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သတင်းထောက်က မှားပြီးရေးတာလား။ တကယ်လားတော့ ကျနော်လည်း မသိပါဘူး။ ဒေါ်လာဘီလီလျံ ၂၀-ဆိုတာက မြန်မာအစိုးရလက်ထဲမှာတောင်မရှိတာဆိုတော့ ဘယ်သူက ၀ယ်နိုင်ပါ့မလဲသိဘူး။ အိတုံ….နင့်မှာ အဲဒိငွေရှိတယ်လို့ ကြားတယ်။ ငါ့ကို တစ်စီးလောက် ၀ယ်ပေးစမ်း။
မြေပေါ်ကုဋေရှစ်ဆယ် မြေအောက်ကုဋေရှစ်ဆယ် ဆိုတဲ့ရှေးက စာချိုးလေးကိုသတိရမိပါတယ်.
ကားထုတ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေပြောတာဖြစ်မယ်။ သတင်းကိုသေချာဖတ်ကြည့်ပါ။ ဘီလီလျံ ၂၀-အထိ…လို ပြောထားတယ်။ ရှိရမယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ သတင်းထောက်က စာမရေးတတ်တာတော့ အမှန်ပဲ။ အဲဒါ မြန်မာပြည်က သတင်းထောက်တွေရဲ့ အရည်အချင်းလားမသိဘူး။
(၁) တိုက်ပင်မှားရိုက်တာများလား ပေါ့ … ။ (မသေချာ) ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြည်မြန်မာဂျာနယ်က ..ဟိုတစ်ခါ အစ်မနွယ်ပင် ရေးသလို … ငါးရှည့်ဝင်သွားတာ .. ဆီးအိမ်ထဲရောက်သွားသလိုတွေ …. အတည်ပေါက်နဲ့ ရေးတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ရယ် ၊ နောက် .. ဘာသတင်းလဲ မမှတ်မိတော့ဘူး ..အဲ့ဒီလိုပဲ တပုဒ်ရယ် ဖတ်ခဲ့ဖူးတာကြောင့်ပါ … ။
(၂) အစ်မသဲနုအေးပြောသလို နဲ့ … ဘော်ဒါတစ်ယောက်တို့ကို ဆွေးနွေးသလိုပေါ့ …. ငွေဖြူ ၊ ငွေမည်း ပြသနာအတွက်ကြောင့်လို့လည်း ထင်တယ် … လာပြောပြတဲ့ ဘော်ဒါကတော့ …Money Loundryလုပ်မှာလို့ထင်ပါသတဲ့ … ။ သူပြောပြသွားတာလေးတွေက .. အများကြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပေမယ့် …. ပို့စ်ထဲမှာတော့ ထည့်မရေးတော့ပါဘူး …။
July လထဲမှာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကလာတော့မယ်လေ။ အဲလိုလာရင်သူကငွေကြေးထိန်းချုပ်မှု့တွေ လုပ်တော့မှာ။ အဲဒီကျမှ ဆိုမလွယ်ဘူးလေ။ သူတို့ဇာတ်ရှုပ်သူတို့ပဲသိတာဆိုတော့ အခုကတဲ ကကြိုရှင်းထားတာဖြစ်နိုင်တယ်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီ.. ဂျီအမ်တောင် ဘီလျှံ၂၀ ဘဏ်ထဲရှိမယ်မထင်…
ဖယ်ဒရယ်က ဘီလ်အောက်လုပ်ပြီး ဖို့ဒ်..ဂျီအမ်..ခရိုက်စလာကယ်တာတောင်.. ဘီလျှံ ၂၄.၉ တဲ့..
Auto Bailout – US Economy – About.com
In December 2008, the three major U.S. auto industry companies — GM, Chrysler and Ford — asked the government fora$34 billion bailout to avoid bankruptcy. The Big3stated that their demise would trigger3million layoffs withinayear, plunging the economy further into recession.
In January 2009, the Federal government used $24.9 billion of the $700 billion bank bailout fund to rescue two of the Big3:
$17.4 billion for General Motors and Chrysler.
$6 billion for GMAC.
$1.5 billion for Chrysler Financial.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲ့ဒီလောက် ချမ်းသာတဲ့လူမရှိဘူးလို့ ကျွန်မလည်း ထင်ထားတာ .. ရွာထဲက ရွာသားတစ်ယောက်က ချတွက်ပြတော့မှပဲ … ရှိနိုင်တာပဲလို့ …. လက်ခံလိုက်ရတယ် … ။
ဘယ်သူတွေလည်းတော့ မပြောတော့ပါဘူး … အချက်အခြာနေရာတွေမှာ .. စီးပွားရေး ဖြန့်ကျက်နေသူတွေရဲ့ အိမ်တစ်လုံးတောင် … မနည်းမနောတန်တာပဲ … ။
ဟုတ်ပါ့။ အိမ်နဲ့မြေတန်ဖိုးတောင်မှ သိန်းသိန်းချီတန်တဲ့ အိမ်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဒါကရန်ကုန်တင်။ စကာင်္ပူမှာလဲကွန်ဒိုတွေဝယ်ထားသေးတယ်။ တချို့ဆို အော်ဇီမှာတောင်ဝယ် ထားတယ်တဲ့။ ပေါင်းလိုက်လို့ကတော့ ပြည့်ရုံမကပိုတောင်နေအုံးမှာ။ တပ်ချုပ်ကြီးဆို နောက်ဆုံး ပိတ်အိပ်နဲ့လွယ်သွားတာ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းလေ။ ရှေ့ရှေ့တွေမှာတော့မတွက်တောင်မ တွက်နိုင် တော့ဘူး။
$1 billion = $1000 million
$1 million = ကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း ၈သောင်းကျော်
သူကြီးရေ $1million မှာ သိန်းရှစ်ထောင်ကျော် မဟုတ်ဘူးလားဗျို့။
ဒေါ်လာ ၁သန်း.. သိန်းရှစ်ထောင်ပါ..
ဘီလျံ ၂၀…………ဘဏ်မှာထားပြီး…နှက်နေတော့မယ်။ နင်တို့ဆီလာတော့ဘူး….ဒါပဲ..။
ကျုပ်ကတော့ ၊ အဲဒီ ဘီလျှံ၂၀ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ လူဆီမှာ ၊ ဘက်စ်မန်းလုပ်ချင်တယ်ဗျာ ။ တစ်ကယ်ပြောတာပါ ။
အကို့ မှာ ရှိတယ်..
အူးရေး .. ဗိုက်သဋ္ဌိန်း ..
သားသားလည်း လုပ်ချင်လို့ ..
စ ပက် တာ မန်း ဆိုတာ ဘာကြီးတုန်း
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောစမ်းပါ တရုတ်မ ရယ်
သူကြီးဆီမှာ သန်းနှစ်သောင်းရှိပါသည်။သူကြီးခေါင်းမှ သန်းတစ်သောင်း၊သူကြီးကတော်ထံမှ သန်းတစ်သောင်း စုစုပေါင်းသန်းနှစ်သောင်းရှိတယ်။
ရွာထဲမှာ ပါမစ်လိုချင်တဲ့လူရှိရင်ပြော…တစ်ယောက်ကို တစ်သန်းပေးမယ်။
မြန်မာပြည် ဝယ်ခိုင်းမလို့ များလားမသိ။